Thought after “သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Thought after “သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း”
Thought after “သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း”
Posted by Foreign Resident on Sep 21, 2011 in Creative Writing | 16 comments
Recently, I sawalot of posts about “သေရည် အရက်”
သေရည် – windtalker
Beer ၊ ၀ီစကီ ၊ ၀ိုင် နှင့် မြန်မာ မိန်းမများရဲ့ စာရိတ္တ – etone
စိတ်ပျက်မိသည့်အရက်ကြော်ငြာ – နည်ရဲဇော်
As majority of Myanmar are Buddhism &
Our “Lord Buddha” forbade “သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း”
That might be the main cause,alot of Myanmar people
willingly criticize in “သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း”.
Normally, I don’t drink intentionally, in my whole life
(except some occasions for social purpose) &
I agree in certain extent to constrain “သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း”.
But, this isareally big “BUT”,
In my opinion, if you can control your drinking habit & limit,
“သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း” still hasatiny good outcome/result.
( kai says: Enhance Your Beauty With Red Wine
There might be the worst thing that you forgot to criticize.
Even though, drinking has some positive outcome,
But, smoking has no positive outcome for your health &
In addition, it also damages the health of your surroundings
Then, you may clearly see,
Smoking is definitely worse than Drinking.
I hope every villager has already knew the danger of smoking
(Cancer, Heart Diseases, infant fatality & etc) &
So, I don’t want to explain in this matter anymore.
I want to emphasis is lack of restriction/regulation to smoking in our country.
Most of the Foreign Countries I have ever visited have stricter regulation than our country (Myanmar) do.
Actually, Australian Government wanted to eliminate smoking
But, because of human right (Smoker’s individual right to smoke)
Our government cannot eliminate smoking in Australia.
So, they restrict smoking for public health reason.
Recently, I have been to Sydney Duty Free Shop &
By seeing following photos, you may realize &
compare how Australian considers to Drinking & Smoking.
Our stricter regulation strongly prohibits
– Smoking in all public indoor areas
– Any way of cigarette transaction to children & adolescents
– Cigarette advertisement in public places & any form of Media
( both written or display in TV )
Recent law does not even allow children & adolescents to seeacigarette.
So, cigarette counters should not be displayed in public places.
(Especially for those areas where children & adolescents can be reached)
Then, they have to cover the cigarette counters &
They need to post warning placards upon them.
These counters can only be revealed upon adult customer request.
those cigarettes must be cover again by another proper layer more
To prevent accidental seeing of children & adolescents.
Nowadays, cigarette transition really looks like doing business in black market.
Now, I hope, our villagers may realize
what our country needs to do more in Smoking.
Sydney Duty Free Shops
Alcohol can be shown & sold independently
But, Cigarette Counters must be properly covered & post warning placards upon them
These Cigarette counters can only be revealed upon adult customer request
They still have another plastic layer more to prevent accidental seeing of children & adolescents
Frightening & dreadful photos & warning label upon Cigarette cartons
( I putalot of photos as I think our villagers love photos )
ကိုဖောရိန်း တရုတ်ပြည်ရောက်တုန်းက တရုတ်တွေ စီးကရက်ကို စည်းကမ်းမရှိသောက်ကြတာ တွေ့ခဲ့မယ် ထင်တယ် … တရုတ်ပြည်က တိုးတက်ပေမယ့် စီးကရက်သောက်တဲ့နေရာမှာတော့ စည်းကမ်းမရှိကြဘူး … စီးကရက်တော်တော်ကြိုက်ကြတယ် …
မင်္ဂလာဆောင် စားပွဲတွေမှာ စာပွဲတ၀ိုင်းကို 70ယွမ် နံမည်ကြီးစီးကရက်ကြုံဝှား တစ်ဗူးနဲ့
အရက်သောက်တာအကုသိုလ်တမျိုးပဲဆိုတာတော့ ငါးပါးသီလထဲမှာလည်းပါနေတော့ သိတယ်ပေါ့နော်
မသိတာက အရက်သောက်ရုံနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်တာလား သောက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့စိတ် ကြောင့် ဖြစ်တာလားဆိုတာပါ
သောက်ရုံသောက်ပြီး လူက ပုံမှန်ပဲ တချို့ ဆို ပိုပြီးတောင် ပြောရဆိုရ ကောင်းသွား တယ်ဆိုရင် ရော် အကုသိုလ် ဖြစ်တာပဲလား အဲဒီလို သောက်ပြီး ဘာမှမပြောင်းလဲတဲ့သူအတွက် ရေသောက်တာ နဲ့အရက်သောက်တာ အတူတူပဲဆိုရင် ရော်
ငါးပါးသီလထဲ.. ရှောင်ကြဉ်ရမယ်သတ်မှတ်ထားတာက.. အရက်လို့.. မထင်မိဘူး..
(သုရာ မေရယ မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ)မူးယစ်မေ့လျှော့စေတတ်တာတွေကို အလွန်အကျွံမှီဝဲခြင်းလို့.. ဗုဒ္ဓကပြောလိုရင်းဖြစ်မယ် မှန်းဆမိတယ်..။
မှီဝဲလို့.. မူးယစ်တွေဝေမေ့လျှော့တာ..မဖြစ်ရင်.. ရမယ်..အပြစ်မဖြစ်ဖူးလို့လည်း.. သုံးသပ်မိတယ်..။
မူးယစ်မေ့လျှော့တတ်တာတွေထဲ.. ဆေးခြောက်ရော.ဘိန်းရော၊ ကိုကင်းေ၇ာ။ ယာမရော..။ဓါတု ဆေးလုံးတွေ..အကုန်ပါမှာပဲ..။
လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ မောဟစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေသမျှ အကုသိုလ်တွေပဲလို့ သိထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ငါးပါးသီလထဲမှာ ထည့်ထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒုစရိုက်တရား ဆယ်ပါးထဲမှာတော့ မပါဝင်ပါ။ လူဝတ်ကြောင်တွေအဖို့ အရက်သောက်တိုင်း ငရဲကြီးမယ်လို့ မယုံကြည်ပါ။ စိတ်နဲ့ အဓိက ဆိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သီလတွေထဲမှာ ထူးခြားတာကတော့ “ဋ္ဌာနာ” ဆိုတဲ့ပုဒ် ပါဝင်နေတဲ့ သီလများဟာ ကြိုတင်စဉ်းစားရုံနဲ့ အကုသိုလ် မဖြစ်ကြောင်းတော့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
အရှင်းဆုံးကတော့ မိမိ၊ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်စေနိုင်တာ မှန်သမျှ အကုသိုလ် အမှုတွေလို့ လက်ခံပြီး အဲဒီပေတံနဲ့ တိုင်းတာ အကောင်းဆုံးလို့ မြင်ပါတယ်။
ကာလူး မိတ်ဆွေများ ချမ်းသာကြပါစေ။
ဗမာပြည်မှာ စီးကရက်ရောင်းနေတာ ဘယ်သူထင်လဲ ညှင်း ညှင်း ညှင်း……..
နောက်ပီး အဲဒိ စီးကရက်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်လဲ သိလား……..
ဦးဖောရင်းကြီး မတွေ့တာကြာပြီ တရုတ်မှာတော်တော် ပျော်ခဲ့လား
ဦးဖောရင်း ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်
ဆေးလိပ်ကတော့ နဲနဲပဲသောက်သောက် များများပဲသောက်သောက် သောက်တဲ့သူရော ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုရော ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာ အမှန်တရားပဲ သူ့ဆီက ရတဲ့ကောင်းကျိုး ဘာမှ မရှိဘူး
အရက်ကတော့ သောက်တဲ့သူရဲ့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ပေါ် မူတည်မယ်ထင်တယ် ဘယ်အရက်သောက်မှာလဲ (မကောင်းတဲ့ အပေါစားအရက်ကတော့လူကိုဒုက္ခပေးမှာပဲ)၊ ဘယ်အချိန်သောက်မှာလဲ (နေ့လည်လောက်ကတဲက ကစ်နေရင်လဲ မဖြစ်) ၊ ဘယ်လိုသောက်မှာလဲ (အမြည်းနဲ့ မျှမျှတတဆို ခံသာမယ်) ၊ ဘယ်လောက်သောက်မှာလဲ (စားကောင်းသောက်ကောင်းလောက် ထိန်းနိုင်ရမယ်) ဘယ်သူတွေနဲ့သောက်မှာလဲ ( ဘာမှ မစဉ်းစားနဲ့ ချသာချ ဆိုတဲ့ ငတိတွေနဲ့လဲ သောက်ရင်မလွယ်)
သေချာစဉ်းစားသောက်ရင်တော့ ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ် (ဒါတောင် အသည်းရောဂါတွေ ကင်းနေဦးမှ…)
I’m ဗဲရီးစိတ်ညစ် after I read your post !
Because I don’t အကုန်နားလည် your post !
I’m very poor အင် အင်းဂလိရှ်
I’m very poor အင် ဗမာလို
So, I tried to add more photos.
But, written in English might be good for “သူကြီး”
as advertisers may interest to add AD in MG.
အတော်လုပ်ပါ ကိုရွှေနိုင်ငံခြား သားကြီးရယ် သူပဲ သူ့ကိုယ်သူ အရမ်းဥာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဖော်ကောင်လုပ်ထားပြီး
လို့ ဟိုတနေ့ကမှ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီးကို ဖတ်လိုက်ရတာကို
အခုမှ ဗမာလို အားနည်းတယ်ဘာတယ်နဲ့ အမျိုးမျိုးမပြောနဲ့ ။ ကိုယ့်စကားကိုယ် တာဝန်ယူရမယ်။ ဒါပဲ။ ဒီက မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ အကောင်းမှတ်မနေနဲ့ ။ ဂွင်ထဲ ၀င်လို့ကတော့ ဟင်းဟင်း….. ဗမာလိုရိုက်ကျင့်တာ လွန်ရော ကျင့်မှ အင်မတန်ဥာဏ်ကောင်းလှတဲ့ ကိုရွှေနိုင်ငံခြားသားကြီးအတွက် ၁ ရက်ပေါ့
မရဘူး နောက်တခါ ရေးချင်ရင် ဗမာလိုပဲရေးရမယ် သူပဲ ဒီကလူတွေ အရမ်းညံ့တယ်လို့ပြောပြောနေပြီး
မရရအောင်ကျင့်ပြီးရေးရမယ် ။ အပျင်း
I never said “ဒီကလူတွေ အရမ်းညံ့တယ်လို့ပြောပြောနေပြီး”
“ဗမာလိုရိုက်ကျင့်တာ” isapractice & it is nothing to concern with intelligent.
” အပျင်း ” Yes, sometimes, I amalazy fellow, especially when I don’t have enough incentive.
ဒီမှာလည်း အခု အရက်ကြော်ငြာတွေ၊ ဆေးလိပ်ကြော်ငြာတွေ ကို လူမြင်ကွင်းမှာ ဆိုင်းဘုတ်တော့ ထင်သာမြင်သာ ထောင်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဘီယာဆိုင်များလည်း လိုင်စင်ထပ်မချတော့ဘူးလို့တော့ ကြားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနိုင်ငံများမှာလို လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အတုယူသင့်ပါတယ်။
ရှေ့လျှောက် အပြောင်းအလဲကောင်းလေးတွေကို မျှော်လင့်ပြီး ရွှေပြည်တော်ကြီး နီးတော့မည်ဆိုပြီး အားတင်းနေရတာပါပဲ။
ဆေးလိပ်အနံဆို မခံနိုင်ဘူး။ တရုတ်ပြည်မှာတော့ နေရာတိုင်းမှာ ဆေးလိပ်နံရတယ်။
ဆေးလိပ်တော်တော် သောက်တာ လွန်လွန်းတယ်။
search engines တွေနဲ့.google .ကြော်ငြာတွေက..အဲဒီ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့မှ.. အလုပ်လုပ်တာမို့ပါ..။
ခေါင်းစဉ်ကို အင်္ဂလိပ်လို တတ်နိုင်သလောက်ထည့်ပေးကြစေချင်တဲ့အကြောင်း..။
ယူအက်စ်လည်း.. ဆေးလိပ်ကြော်ငြာကို တီဗီမှာ မတွေ့ရသလောက်ပဲ..။
တွေ့ရင်.. ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီက.. ဆေးလိပ်မကောင်းကြောင်း ..လူသေနိုင်ကြောင်း.. ဇယားတွေ..အထောက်အထားတွေပြ..ကြော်ငြာရင်း..သူကုမ္ပဏီအမည်ထည့်သွားတာပဲ လုပ်ကြတာ..။
မြန်မာပြည် မှာလဲ ဆေးလိပ် မသောက်ရတဲ့နေရာတွေ ရှိလာပါပီ ၊
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဆိုရင်လဲ ဆေးလိပ်သောက်ရမဲ့အခန်း သီးသန့် တွေ့ရပါတယ် ။
ကျနော်တော့ ဆေးလိပ်နံ့ ရရင် အသက်ရှုရတာ မဝ သလို ခံစားမိပါတယ် ၊
ဒီထက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းပါ ။
သုရာ- အရက်သေစာကို….. မေရယ – မေမေ့ရှေ့တွင်၎င်း … မေစ္ဆ – မြစ်ဆိပ်တွင်၎င်း
ပမာဓဌာနာ- ရဲစခန်းရှေ့တွင်၎င်း… ဝေရာမနိ-ရှောင်ကြင်အပ်သည်…သိက္ခာ ပဒံ-ကာတွန်းရေးဆရာ….
သမာဓိ- ချိန်ခွင်ချိန်စား သောသူ….ရာမိ- ကုလား လူမျိုးတို့နှင့်လည်းတွဲမသောက်အပ်ပေ။
မေမေ့ရှေ့တွင်သောက်လျှင် မိဘ ကိုစော်ကားရာရောက်မည်..
မြစ်ဆိပ်တွင်သောက်ပြီး မူးလျှင် မြစ်ထဲ ကျပြီး မာလကီးယားနှိုင်သည်..
ရဲစခန်းရှေ့တွင်သောက်လျှင် မူးယစ်ရမ်းကားဖြင့် အချုပ်ခံရနှိုင်သည်…ဒါတွေကြောင့်တားသည်
အထက်ပါ လူသုံးမျိုးတို့သည်လည်း ဘယ်အခါမဆို သောက်လုံးကြီးလှသောကြောင့် အတူမသောက်အပ်
အဲဒါတွေနဲ့ဝေးဝေး ရက်စတောရင့်တွေ ဟိုတယ်ကြီးတွေ ကာရာအိုကေတွေ ပန်းခြံတွေမှာသောက်
အိမ်မှာလူစုသောက် မိတ်ဆွေခြံထဲမှာ ဘာဘီကျူး လုပ်ပြီးသောက် အဲဒါဆိုလွတ်တယ် တဲ့…..
( ဘပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ပွဲထဲမှာ လူရွင်တော်ပြောတာကြားဘူးတာ ငရဲကြီးရင် ဘမပါဘူး)